पक्कै पनि यो चुनाव भनेको विकास र समृद्धिकै लागि हो-रुंगटा - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता पक्कै पनि यो चुनाव भनेको विकास र समृद्धिकै लागि हो-रुंगटा
पक्कै पनि यो चुनाव भनेको विकास र समृद्धिकै लागि हो-रुंगटा
वीरगंज । पछिल्लो समय राजनीति नै कसैकालागि पेशा बनेको छ । यसैलाई कतिपयले कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । कतिपयले रोजगारी नै राजनीतिलाई ठानेका छन् । तर राजनीतिलाई आर्जनको माध्यम बनाइनु हँदैन र राजनीति विशुद्ध सामाजिक सेवा र जनताको हितका लागि गर्नुपर्छ भन्छन् अनिल रुङ्गटा ।
पर्सा (वीरगंज) क्षेत्र नम्वर १ मा संघिय संसदकालागि नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका रुंगटा राजनीतिलाई अरुले कमाइ खाने भाँडो बनाएको प्रति चिन्तित देखिन्छन् । “राजनीति त राज्यका नीतिहरु जनताको घरघरमा कसरी पुर्याउने, जनतालाई कसरी सम्पन्न बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । यो पनि एउटा तपस्या नै हो ।” उनि भन्छन् । २०४३ सालदेखी नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघबाट राजनीति थालेका रुङ्गटा एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । राजनीतिमा लागेका हरेकले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि छुट्टै काम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन उनि । जब सम्म राजनीतिमा लागेकाहरुले आयआर्जनका लागि अन्य काम गर्दैनन् तब सम्म भ्रष्टाचार जस्ता कार्यले प्रोत्साहन पाइरहने बताउछन् रुङ्गटा ।
मुलुककै प्रमुख प्रवेशद्वार तथा आर्थिक राजधानीको रुपमा परिचित पर्साको सदरमुकाम बिरगञ्ज र त्यसकाे १ नम्वर क्षेत्रमा संघिय संसदकालागि उम्मेद्वार बनेका उनै रुङ्गटासंग गरेकाे कुराकानिकाे सम्पादित अंश ।
१) तपाईको राजनीतिक यात्रा कहिले र कसरी सुरु भयो ?
जति बेला पञ्चाय शासन थियो । बहुदलीय व्यवस्था विरुद्धमा राज्यसत्ता सन्चालन थियो । तेतिबेला देखि नै मैले राजनीतिक यात्रा शुरु गरे । सम्झेर ल्याउँदा २०४३ सालमा नेपाली कांग्रेसको युवा सस्थाको रुपमा, विद्यार्थी संगठनको रुपमा रहेको नेविसंघ बाट नै मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा शुरु गरे । बहुदलीय व्यवस्थाका कुरा गर्दा, प्रजातन्त्रका कुरा गर्दा जतिबेला राज्यद्रोह लगाइन्थ्यो तेति बेलादेखि थालेको राजनीति आज सम्म पनि अडिग रुपमा छ । निरन्तर नै छ । बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रविना मुलुक सबल हुँदै हुँदैन भनेर लागिरहँदा राज्यसत्ताबाट विभिन्न दुखेसो भोगेको मध्ये म पनि एउटा हुँ । तर पनि विचलित नभइ कांग्रेस र यसको सुभेच्छुक सस्था नेविसंघमा रहेर निरन्तर राजनीतिमा लागिरहेँ । आज यो स्थान सम्म हामी आइपुगेका छौँ ।
२) तपाई पछिल्लो पटक २०७० सालको संविधानसभामा मनोनित हुनुभएको थियो । त्यो बेला यहाँका जनताको लागि के के-के गर्नु भयो ?
पछिल्लो पटकको संविधानसभा निर्वाचन र परिवर्तित संसदमा रहेर सवैभन्दा पहिलो ठुलो काम सविधान बनाउने काममा योगदान दिइयो । अहिले केहि नपाएका केहि नगरेको भनेर भन्नै मिल्दैन कसैले पनि । किनकि मुलुकलाई अन्यौलताको बाताबरणबाट चिर्न । मुलुकका सबैको हक अधिकार सहितको संविधान जारी गर्नु भनेको निकै महत्वपूर्ण कार्य थियो । त्यो हामीले पुरा गर्यौँ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । प्रमुख जिम्मेवारी संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयन नै थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन र अब हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि संविधान कार्यान्वयनले गति लिँदै छ । यो संगसंगै विभिन्न विधेयकहरु बनाइएको छ ।
अर्को काम मेरो संसदिय विकास कोषको रकमबाट यस क्षेत्रका लागी विकाशमा खर्चेको छु । विरगंजको सम्भाव्यता र यहाँका लागी हामीले पटक पटक आवाज उठाएकै छौँ । वीरगंजलाई आर्थीक राजधानी सहित यसलाई विशिष्ट शहर बनाउने भनेर नेतृत्वदायी भुमिका मैले खेलेकै हो । पछिल्लो पटक केहि कुरा अगाडी बढेको छ केहि बढाउनु पर्ने अवस्थामा छन् । मेरो मुख्य लक्ष्य नै विरगजको सभाव्यता केलाउने र वीरगंजलालई समृद्ध र पहिचान सहितको शहर बनाउने नै हो । यहाँ विकास संगसंगै रोजगारी, वीरगंजको युवा–(विद्यार्थी, नागरीक समाजसंग जोडिएका कुराहरु उठाउने योजना नै हो । ती सबैलाई समेटेर एउटा ठोस योजनाका साथ हामी अगाडी बढेका छौँ । मेरो आगामि कार्यकाल विकास र समृद्धिका लागि नै खर्च हुने छ ।
३) फेरी पनि यहाँका जनताले तपाईलाई नै किन भोट दिने ?
पक्कै पनि यो चुनाव भनेको विकास र समृद्धिकै लागि हो । पहिला म संविधान बनाउनका लागि गएकोे थिएँ । सबैलाइ ज्ञात नै छ । त्यो कार्यभार मैले सफलता पूर्वक रुपमा सम्पन्न गरे । अब भनेको विकासको चरण शुरु हुन्छ । यस अघि हामीले अधिकांस राजनीतिक मुद्धाहरु टुग्यायौँ । मधेसको बाँकि रहेको संविधान संसोधन बाहेक अरु सकिएको छ । हाम्रो दुइतिहाइ आउने वितिकै सबैभन्दा पहिले हामी संविधान संसोधन गर्छौ । त्यस पछि विकासको अभ्यास हुन्छ । कांग्रेसविना विकास असम्भव छ भन्ने कुरो जनताले बुझेका छन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस नै समृद्धिको यात्रामा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्छ भन्ने कुरो सबैलाइ थाहा छ पटक पटक प्रमाणीत पनि भएको छ । त्यसैले यो पटक पनि जनताले नेपाली कांग्रेस नै चुन्ने छन् र त्यसकालागि मलाई चुनेर पठाउने छन् भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
४) के के छन तपाईका चुनावी ऐजेण्डाहरु ?
प्रमुख मुद्धा भनेकै विकास र समृद्धि हो । अब अन्य कुरामा अड्केर बस्ने अवस्था छैन । विकाश अपरिहार्य छ । वीरगंजलाई पहिचान सहितको विकास गराउने समृद्ध गराउने अभियानलाई सार्थकता दिनु छ । यहाँ रोजगार छैन । रोजगारको अवसरहरु छैन । स्वास्थ्य, शिक्षाका सुविधाहरु पर्याप्त छैनन् । यी आधारभुत कुराहरुलाई पहिले सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आवश्यक भौतिक संरचना, यातायात सञ्जाल, सडक लगायत समग्र रुपमा वीरगंजलाई माथी उठाउने अभियान नै हाम्रो एजेण्डा हुन् ।
५) विकासका लागि तपाइले सपना त धेरै देख्नु भएको छ । कसरी कार्यन्वयन गर्नु हुन्छ ? जनतालाई खालि सपना बाँड्ने काम मात्रै हाे की ?
विगतको निर्वाचनबाट मैले सभासद र रुपान्तरित संसदमा बसेर दुवै भुमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ । मलाई थाहा छ । वीरगंजको समस्या के छ । मलाइ थाहा छ, काठमाडौँले वीरगजलाइ कसरी हेर्छ भन्ने । जहिल्यै पनि वीरगंजलाई विभेदमा पार्ने गरेको महसुस मलाई राम्ररी थाहा छ । त्यो कहाँ बाट सच्याउनु पर्छ त्यो मलाइ थाहा छ । वीरगजको विकासका लागि योजनाहरु कहाँबाट ल्याउनु पर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ । वीरगंजका लागी बजेट कहाँबाट ल्याउनुपर्छ त्यो राम्ररी बुझेको छु । मलाई यो सब अनुभव भएको हुनाले वीरगंजलाई विकास गर्नका लागि, यसलाई समृद्ध सहरको रुपमा रुपान्तरित गर्नकोलागि मेरो विकल्प अरु हुनै सक्दैन । १ नम्वर क्षेत्रको विकास, वीरगंजको विकास गर्नका लागि मैले राम्रो योजना बनाएको छु र त्यसको कार्यान्वयन पनि मैले अनुभवका आधारमा राम्रै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास सबैमाझ दिलाउन चाहन्छु ।
६) मतदाताहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनुभएको छ ?
अहिले मेरो दैनिक ज्यादै व्यस्त बनेको छ । विहान देखि राती अबेर सम्म पनि म यहाँका मेरा बुवा, मुवा, दाजुभाइ दिदी बहिनीकै घरघरमा गइरहेको छ । सबैमा उत्साह पाएको छु ।
संविधान बनेपछि अहिले सबै कुराहरु जनताले हामी भन्दा पनि बढी बुझेका छन् । जनताले सुक्ष्म अध्ययन गरिसकेका छन् । हामीले जनतालाइ न अध्यारोमा राख्न सक्छौँ, न झुक्याएर राख्न नै सक्छौ । जनता जागरुक भइसकेका छन् । कसैले झुक्याउन नखोजे हुन्छ । कुन पार्टीका कुन उम्मेद्वारले काम गर्न सक्छ सबै कुरा जनतालाई थाहा छ । सबै उम्मेद्वारको पृष्ठभुमि केलाएर राखेका छन् मतदाताले । मतदाताले उत्साहपूर्वक मलाइ साथ सहयोग र समर्थन दिइरहेका छन् । यसले मलाई पनि थप हौसला बढाएको छ । अब वीरगंजको विकासका लागि अनिल बाहेक अरुको विकल्प छैन भन्छन् मतदाता । मैले त्यस्तो खालको न्यानो साथ समर्थन पाएको छु । संगसंगै हिँडिरहनुभएको छ । निकै राम्रो माहोल छ ।
७) कम्युनिष्ट गठबन्धन एकातिर छ अर्काे तिर मधेसी पार्टीबीचकाे सहकार्य छ यसले तपाइकाे चुनावी परिणामलाई असर पार्दैन ?
कम्युनिष्टहरुको जुन तालमेल पछिल्लो समयमा भयो त्यसको प्रभाव मेरो क्षेत्रमा शुन्य प्रायः छ । मधेसको सवालमा कम्युनिष्टहरु कहिल्यै पनि सकारात्मक नरहेको विगतका उदाहरणले देखाइसकेको छ । मधेसलाइ जहिल्यै पनि टाढा राख्ने काम कम्युनिष्टहरुले गरेकै हुन् । राष्ट्रबादको नाममा एउटा राजनीति गर्ने हत्कण्डा अहिले सबैले बुझिसकेका छन् । झुठो राष्ट्रबाद र उखान टुक्काको नाममा अब मत पाउने चाल छैन । दाेस्राे कुराे मधेसवादी पार्टीकाे । उनिहरू मधेसकाे मुद्धामा संसदमा छिरेर के गरे । भत्ता र सत्तामा मात्रै रहे । सत्तामा बसेर भत्ता पनि लिने अनि जनतालाई मुर्ख बनाएर अान्दाेलनमा उतार्ने उनिहरूकाे पुरानै नियत हाे । त्यसैले त्याे सब जनताले बुझेका छन् ।
अहिले कांग्रेसमा लहर आएको छ । यो पार्टि मात्रै सबैलाई लिएर जान सक्ने हो भन्ने जनताले बुझेका छन् । वीरगंजका मतदाताले बुझेका छन । त्यसैले जुनसुकै गठबन्धन, जुनसुकै तालमेल बनाएपनि यहाँ केहि फरक पार्दैन ।
८) कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
कम्युनिष्टहरुको तालमेल सत्ता हत्याउने खेल बाहेक केहि पनि होइन । यसले मुलुक निरंंकुसता तर्फ लैजान्छ कि भन्ने गहिरो चिन्ता उत्पन्न भएको छ । तर उनिहरुको दिवा स्वप्न पुरा हुने वाला छैन । किनकि सबै नेपाली जनताले बुझि सकेका छन् । उनिहरु यो निर्वाचन परिणाम संगै अस्विकृत भएर बढारिने छन् । यसमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्रति आस्था र विश्वास गर्ने नेपाली जनताले कांग्रेस बाहेक अरुमा मत दिनै सक्दैनन् ।
९) तपाई व्यवसायी मान्छे, व्यवसायलाई संरक्षण गर्न राजनीतिमा आयो भन्नेहरु पनि छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरो त म व्यवसायमा लाग्नुभन्दा पहिले देखि नै राजनीतिमा लागेको मान्छे । दोस्रो कुरो राजनीति गर्ने हरेक मान्छेले कुनै न कुनै पेशा गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । स्वस्थ राजनीतिकोलागि राजनीतिमा लागेका हरेकले कुनै न कुनै काम गर्नुपर्छ । उसको रोजिरोटिको व्यवस्था भयो भने सहज हुन सक्छ । भ्रष्टाचार जन्य कुराहरु गर्न उसलाई रोक्छ । गर्नुपर्ने आवश्यकता नै आउँदैन । मैले भन्ने गरेको छु जो आफ्नो केहि पनि काम गर्दैनन् हेर्नोस उनिहरु बढी राजनीतिलाई कमाउ धन्दामा लगाइरहेका हुन्छन् । किनकि पालिनु पर्यो नि । पेट पाल्नकै लागि राजनीति गर्ने होइन । राजनीति भनेको त सेवा हो । जनताको सेवा । त्यसैले पहिला आफ्नो केहि गर्नुस् अनि जनताको सेवागर्न सहज हुन्छ । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो जसले बनाउँछ उसैले यस्ता कुप्रचारहरु गर्दै हिँड्ने गर्छन् । मेरो व्यवसाय एक ठाउँमा चलिरहेको छ । राजनीति बाटै मैले रोजिरोटि जोड्नु पर्दैन । मलाई राजनीतिबाट कमाएर राख्नु पनि छैन । राजनीति त विसुद्ध समाज सेवाका लागि हो । बरु मैले व्यवसायबाट आर्जन गरेको रकम पनि सेवामा खर्चिरहेकै छु ।
१०) जित कत्तिको सहज देख्नु भएको छ ?
मैले मेरो जित प्रष्ट देखेको छु । किनकि नेपाली कांग्रेस प्रति अहिले जनलहर आएको छ । आफु पनि वीरगंजमै जन्मेको, हुर्केको यहाँको बासिन्दासंग नजिकसंग घुलेको भएर म विश्वस्त छु यहाँका मतदाताले मलाई नै चुन्नुहुन्छ । यहाँको समस्याहरु भनेको मेरो समस्या हो । ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय पनि म संग छ ।
अतिबादलाई परास्त गर्न र लोकतान्त्रीक शक्तिलाई जिताउन आवश्यक छ । वीरगंज अहिले महानगर भए पनि नगरपालिका जस्तो अवस्थामा पनि छैन । यहाँ सामान्य आधारभुत कुराहरु पनि पाउन निकै मुस्किल पर्ने अवस्था छ । यहाँका विकासका लागि, समृद्धिका लागि एक कुशल नेतृत्वको खाँचो छ । त्यसकालागि म नेतृत्व लिन तयार छु । यसका लागि मलाई वीरगंज बासीले साथ दिनेछन् भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु ।
११) मतदाताहरुलाई के भन्नुहुन्छ । केहि सुझाउ छन् ?
पक्कै पनि अहिले यो निर्णयक चरणमा हामी सबै छौँ । अहिले नै हो सहि व्यक्ति, सहि पार्टी चुनेर पठाउने समय । त्यसैले म के भन्छु भने हरेक परिस्थितिमा, संकटको समयमा उदारता अपनाउँदै मुलुकलाई यहाँ सम्म ल्याउन भुमिका खेल्ने पार्टी कांग्रेस बाहेक अरु छँदै छैन । राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कांग्रेस अडिग छ । कांग्रेसको विकल्प अरु हुनै सक्दैन । त्यसैले एक पटक विचार गरेर मात्रै मतदान गर्नुहोला । भोलिका दिन फेरी अन्धकारमा विताउने कि उज्याला दिन हेर्ने ? अब कुनै पनि बहाना चाहिएको छैन । अब भनेकाे समृद्धि र विकास मात्रै रोज्ने हाे । यो जनताको हातमा छ । कांग्रेसको विकल्प रोज्न थालिए फेरी पनि हामी बर्षौ पछि पर्ने छौँ । त्यसैले फेरी पनि म भन्न चाहन्छु सुझबुझका साथ कांग्रेस वा भनौ रुख चिन्हमा मतदान गरि विजयी अभियानमा संलग्न होऔँ र मुलुकलाई समृद्ध, शान्त मुलुकको रुपमा परिचित गराऔँ ।
Previous articleयुवा नेता तिवारी दलबल सहित फोरम नेपालमा
Next articleपार्टी छाडेको १० दिन नबित्दै राजपाका केन्द्रिय सदस्य गुप्ता फेरि राजपामा फर्किए